Ny Kongresy amerikana mitady ny sivana amin'ny Internet | Avy amin'ny Linux
Disinformation dia iray amin'ireo olana goavana atrehin'ireo sehatra media sosialy ary i Washington sy ny governemanta hafa no mitady vahaolana mavitrika.
Tamin'ny fihainoana an'i Mark Zuckerberg vaovao, Jack Dorsey sy Sundar Pichai talohan'ny Kongresin'ny Etazonia ny alakamisy, ny solontena Nangataka tamin'ny CEO telo izy ireo mba hanivana bebe kokoa ny Internet. Ity fepetra ity dia tokony hamela azy ireo hifehy ny atiny politika ampitaina amin'ny sehatra misy azy ireo, amin'izany koa Mampanantena valifaty amin'ny fanaovana lalàna ny kongresy raha tsy manatanteraka izany izy ireo.
Amin'ny mpijery, mpikambana ao amin'ny Kongresy voampanga mankany amin'ny Twitter, Google ary Facebook, tarihin'i Jack Dorsey, Sundar Pichai ary Mark Zuckerberg, ny miteraka fahavoazana ivelan'ny Internet, ny fahasalamam-bahoaka ary ny demokrasia.
Ny solontena dia mino fa ireo sehatra telo ireo dia fitaovana lehibe tamin'ny fanafihana ny 6 Janoary tao amin'ny Capitol, izay nanjary fiampangana vaovao ny filoha teo aloha Donald Trump. Raha toa ka niaiky i Dorsey fa nandray anjara tamin'ity hetsika mampalahelo ity ny tranokalany, dia nolavin'i Zuckerberg sy Pichai ny fiampangana nataon'ny olom-boafidy.
Ny fihainoana, natolotry ny filohan'ny Komitin'ny House momba ny angovo sy ny varotra, ny Demokraty Frank Pallone avy any New Jersey, sy ny seza roa an'ny mpanampy azy, Mike Doyle (D-PA) ary Jan Schakowsky (D-IL), dia fisehoan-javatra iray momba ny ezaka manampahefana tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny Kongresy hametrahana ny fifehezana izay ampiasain'ireto orinasa ireto amin'ny resaka kabary politika ho an'ny tombontsoany sy ny tanjon'ny politika. Raha ny marina dia fanintelony ity tao anatin'ny dimy volana latsaka izay nanalan'ny kaongresy amerikana ny CEO ho an'ny orinasan-tserasera.
Ny tanjona dia ny hanery azy ireo sy hanery azy ireo hanivana atiny bebe kokoa amin'ny sehatra misy azy ireo. Raha ny filazan'ny solontena demokratika dia tsy nahavita ny adidiny ny Twitter, Google ary Facebook hanivana ireo feo politika sy ny atiny ideolojika heverin'izy ireo fa mifanohitra na manimba.
Miantso fanasivanana bebe kokoa izy ireo, niaraka tamin'ny fangatahan'izy ireo tamin'ny fandrahonana sazy mihatra amin'ny lalàna (anisan'izany ny fanafoanana ny tsimatimanota eo ambanin'ny Fizarana 230 amin'ny lalàna momba ny fifandraisana amin'ny fanjakana) hampiharana ny fanajana ny lalàna.
Ny mpikambana repoblikana dia nametra ny fitarainany tamin'ny famerenana ny ahiahy. Raha ny filazan'izy ireo dia nampangina loatra ny feo mpandala ny nentin-drazana ireto goavambe media sosialy ireto. hampiroborobo ny fandaharam-potoana politika liberaly. Repoblikana maro no nanizingizina fa ity sivana fanontana ity dia manafoana ny tsimatimanota izay ankafizin'ny orinasa teknolojia eo ambanin'ny Fizarana 230.
Mino izy ireo fa amin'ny sivana bebe kokoa amin'ny Internet, ny sehatra media sosialy dia miasa ankehitriny amin'ny maha-mpanonta ary tsy mpandefa vaovao tsy miandany intsony.
Ny Repoblikana sasany dia nanatevin-daharana ny Demokraty tamin'ny fangatahana sivana bebe kokoa, fa indrindra amin'ny anaran'ny fiarovana ny ankizy amin'ny aretin-tsaina sy ny biby mpiremby fa tsy ny firehan-kevitra ideolojika.
Raha tsy mampiseho mariky ny hatezerana i Zuckerberg sy Pichai Niaraka tamin'ny solontena tamin'ny Alakamisy, dia toa nahavita ny faharetany sy ny fandeferany tamin'ny fangatahana sivana i Dorsey. Nisy fotoana izy nilaza tamim-pahatsorana fa tsy anjaran'ny governemanta sy ny sehatra media sosialy no mpandala ny fahamarinana. "Heveriko fa tsy tokony ho mpandoto ny fahamarinana isika ary tsy tokony ho ny governemanta no tokony ho izany," hoy izy.
Raha ny filazan'ny mpandinika sasany dia ilaina ny tsy hanadino ny tena "despotika" ananan'ireto mpijery ireto. Mora ny tsy miraharaha, hoy izy ireo, satria efa zatra mpitarika politika manao fahombiazana amin'ny fitakiana ireo orinasa media sosialy hanivana ny Internet araka izay itiavany azy.
Raha tsiahivina, Parler, izay iray amin'ireo fampiharana nampidirina betsaka indrindra teto amin'ny firenena, dia nesorina tamin'ny magazay Apple sy Google Play tamin'ny volana Janoary, taty aoriana dia nandà ny serivisy Internet nataon'ny Amazon, taorian'ny nandraisan'ny mpikambana demokratika roa tena mahasosotra ny trano. ny solontena. Notakin'ireo solontena am-pahibemaso izany.
Nandritra ny fotoam-pitsarana "fomba fanao" farany izay nokarakarain'ny Kongresy dia nanambara mazava ny senatera Ed Markey (D-MA) fa ny fitarainan'ny Demokraty dia tsy hoe manasongadina be loatra ireo orinasa ireo, saingy tsy ampy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny Kongresy amerikana dia mitady sivana amin'ny Internet
Mercuro Chrome dia hoy izy:
"... ny fitarainan'ny Demokraty dia tsy hoe manivana loatra ireo orinasa ireo, fa tsy ampy." ... Mba hahatakarantsika tsara: ny fitarainan'ny "Demokraty" dia ny tsy fanivanan'izy ireo tanteraka ny lafiny politika . Mifanohitra amin'izany no izy, tsy maintsy sivanina, hampanginana ary hofoanana ara-tsosialy amin'ny farany.
Nisy olona nilaza indray mandeha, miresaka momba ny fahatongavan'ireo onja fasista any Etazonia: "Ireo fascista rahampitso dia hiantso ny tenany ho anti-fasisista."
Valiny tamin'i Mercuro Cromo